चन्द्रशेखर अधिकारी - कान्तिपुर समाचार
पूर्व राजदूत केशवराज झाको छुरी प्रहार गरी हत्या
फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्व राजदूत ८० वर्षीय केशवराज झाको काठमाडौंको थापाथली स्थित घर भित्रै छुरी प्रहार गरी हत्या भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाका अनुसार उनलाई बिहान घर भित्र मृत अवस्थामा फेला पारिएको हो ।
योजनाबिनै ल्याइएका डोजर प्रयोगविहीन
हिजोआज जताततै देखिन्छन् पहेंला गाडी । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो कोतरिरहेका अनि कतिचाहिँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेका । डाँडाकाँडाका सबैजसो बस्तीमा यी पहेंला गाडी पुगेकै छन् ।
सार्कका लागि राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत गरेर बिमस्टेक किन होटलमा ?
सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ ।
योजनाबिनै भित्र्याइन्छन् हेभी इक्विपमेन्ट
हिजोआज जताततै देखिन्छन् पहेंला गाडी । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो कोतरिरहेका अनि कतिचाहिँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेका । डाँडाकाँडाका सबैजसो बस्तीमा यी पहेंला गाडी पुगेकै छन् ।स्थानीय निर्वाचनपछि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ (डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर) को आयात ह्वात्तै बढेको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा फेरि विवाद : जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?
तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
चन्द्रशेखर अधिकारीका लेखहरु :
शान्ति सेनामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बलियो कुटनीतिक पहलको अभाव
सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीमा चुस्तता नआएमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालले पाउँदै आएको स्थान अन्य दक्षिण एसियाली, अफ्रिकी र केही युरोपेली मुलुकले लिने देखिएको छ ।
कंगोमा नेपाली सेना अब्बल
संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेनामातहत विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ । विकाससम्बन्धी काम अन्य निकायले गर्ने भए पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिसन टिकाइराख्न राष्ट्रसंघले सेनालाई विकास–निर्माणमा लगाएको हो ।
शान्ति सेनाको काँधमा किन थपिँदै छ विकास कार्ययोजना ?
संयुक्त राष्ट्रले शान्ति स्थापनाको लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन टिकाई राख्न विकासका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
दुवै छिमेकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु हुन थालेपछि रेल विभागले पनि रेलमार्ग, प्रविधिलगायत विषयका विज्ञ नेपालीको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै विभागले रेलको प्रविधिबारे बुझ्न थालेको हो ।